မလေးရှားနိုင်ငံသား အလုပ်ရှင်တို့၏ အိမ်ဖော်၊ အိမ်အကူအလုပ်သမများအပေါ် မတရားပြုခြင်းနှင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများ | MoeMaKa Burmese News & Media
(မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် Women Aid’s Organisation (WAO) မှ စုဆောင်းပြုစုထားသော အိမ်ဖော်တို့၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံဘ၀များနှင့် အလုပ်ရှင် မလေးရှားလူမျိုးတို့၏ သဘောထားများကို Friend Ever မှ မှီငြမ်း ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ဘ၀များ ထပ်မံမနိမ့်ကျနိုင်စေရန်အတွက် မိမိတို့တတ်နိုင်သမျှ ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါရန်လည်း အလေးအနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။)
မလေးရှားသည် ပြည်ပအလုပ်သမားများအပေါ် လူသားမဆန်စွာ မတရားပြုမှုများသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပိုမိုဆိုးဝါးလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုးဝါး ဆုံးမှာ အိမ်ဖော်အလုပ်သမများအပေါ် ယင်းတို့၏ ရက်စက်စွာဆက်ဆံမှုများသည် အလွန်ဆိုးဝါးလျက်ရှိသည်ဟု၊ WAO (Women’s Aid Organization) မှ လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ မလေးရှားသည် ပြည်ပမှလာရောက်သော အိမ်ဖော်အလုပ်သမများအပေါ် မတရားညှဉ်းပန်းနှိပ် စက်မှုသည် အခြားနိုင်ငံများထက် ပိုမိုဆိုးဝါးလျက်ရှိပါသည်။ အိမ်ဖော်အလုပ်သမတို့၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသောလုပ်ငန်းခွင်သည် အလုပ်ရှင် နှင့် အိမ်တစ်အိမ်တည်းတွင် နေထိုင်ရခြင်း၊ ယင်းတို့အတွက် ကာကွယ်ပေးထားသော ထိရောက်သောဥပဒေကို မလေးရှားအစိုးရမှမထုတ်ပြန်ထားခြင်း၊ ဥပဒေမှာ အလုပ်သမကိုကာကွယ်ခြင်းထက် မလေးရှားနိုင်ငံသားအလုပ်ရှင်များကို ကာကွယ်ပေးထားခြင်း၊ အိမ်ဖော်အလုပ်သမ များသည် အခြားအလုပ်သမများနှင့်မတူပဲ အလုပ်လုပ်ရသောနေရာတွင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မရှိခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ပိုမို၍ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် မှုကို ခံစားရပါသည်။
ထို့အပြင် မလေးရှားအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းအစိုးရဆိုင်ရာ အလုပ်သမားဌာနတို့၏ပေါ်လစီများက အိမ်ဖော်အလုပ်သမများအရေးနှင့် အလုပ်ရှင်တို့၏ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတို့ကို ကာကွယ်ပေးနေသကဲ့သို့ရှိပါသည်။ WAO မှလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အလုပ်ရှင်များ၏ အိမ်ဖော် အလုပ်သမတို့အပေါ် မတရားပြုမှုများကို များစွာတွေ့ရှိရသည်။
မလေးရှားရှိ (၂) သန်းကျော်ပမာဏရှိသော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနက် ၁၆၀,၀၀၀ ကျော်မှာ အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ WAO သည် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ပြည်ပမှလာရောက်လုပ်ကိုင်ရသော အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူအလုပ်သမတို့အပေါ် အလုပ်ရှင်များမှ ဆက်ဆံမှုကို အသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ရာ အလုပ်ရှင်တို့၏ မတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကို ပုံစံမျိုးစုံ လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံသားအလုပ်ရှင်တို့၏ အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူအလုပ်သမများအပေါ် လူမဆန်သောနှိပ်စက်မှုများမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိပ်စက်မှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိပ်စက်မှု၊ ပါးရိုက်ခြင်း၊ နားရင်းအုပ်ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ဆွဲလိမ်ခြင်း စသည်လူမဆန်သော နှိပ်စက်မှုများကို ခံစားကြရပါသည်။ သူတို့သည် တစ်နေ့ တစ်နေ့ အလွန်အချိန်ကြာကြာ အလုပ်လုပ်ကြရသည်။ နေ့စဉ် မနက် ၅ နာရီ အိပ်ရာမှထကြရပီး၊ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်အထိ အလုပ်လုပ်ကြရပါသည်။ မလေးရှားတွင်လုပ်ကိုင်ကြရသော အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူတို့၏ဘ၀မှာ အလွန်သနားစရာကောင်းလှပါသည်။ အစားအစာကောင်းမွန်စွာမစားရ၍ အဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ အိမ်ရှင်များအတွက် ကောင်းမွန်စွာချက်ပြုတ်ပေးရသော်လည်း၊ သူ့တို့အတွက်မှာ ဆိုးဝါးသော ဈေးပေါသော၊ သူတို့စား၍မကုန်သော၊ မကောင်းသောအစာများကို ကျွေးမွေးခြင်း စသည်ထိ လူမဆန်စွာပြုခံကြရသည်။ အစာကို ၀လင်စွာမစားရ။ ထို့အပြင် အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူအလုပ်သမတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခွင့်မရခြင်း၊ သူငယ်ချင်း အပေါင်း အသင်းများနှင့်တွေ့ချိန် စကားပြောချိန်မရခြင်း၊ အလွန်ဆိုးဝါးသော ခြိမ်းခြောက်မှုများအဖြစ် ဥပမာ.. ညအချိန် တောထဲသို့ကားဖြင့် ပို့ဆောင်၍ တစ်ယောက်တည်းထားပစ်ခဲ့ခြင်း (တစ်ညလုံးပစ်ထားခြင်း)၊ ကြမ်းတမ်းစွာဆိုးဝါးစွာ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ စသည်တို့ဖြင့် များစွာသော လူမဆန်မှုများကို ခံစားရပါသည်။ အနည်းဆုံး ၂ နှစ် အိမ်တစ်အိမ်တည်းနေကာ မနက်မိုးမလင်းခင်မှစ၍ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ထိ အလုပ်လုပ် ကိုင်ရသော အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူအလုပ်သမများအပေါ် မလေးရှားအလုပ်ရှင်များမှ ထပ်ဆင့်၍ လူသားမဆန်ရိုင်းစိုင်းစွာ ညှဉ်းပန်းနှိပ် စက်ကြသည်။
အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူအလုပ်သမတို့အပေါ် နှိပ်စက်သည့်အမှုများစွာရှိသော်လည်း မလေးရှားအစိုးရနှင့် သူ့နိုင်ငံသားတို့ကို မည်သည့် မတ ရားမှု လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ အကာအကွယ်ပေးသော ပြည်တွင်းသတင်းစာများမှလည်း ဇူလိုင်လ ၁၉၉၇ မှ သြဂုတ်လ ၁၉၉၈ ထိ၊ အိမ်ဖော်တို့ အပေါ် အလုပ်ရှင်မှ ကျူးလွန်သော အမှု ၁၉-မှုသာရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့သို့ဆိုလျှင်လည်း အနည်းဆုံး ၃-လတွင် တမှုနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုအမှုများတွင် ပြင်းစွာဒဏ်ရာရအောင် ရိုက်နှက်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်စော်ကားမှု၊ မုဒိမ်းမှု၊ မုဒိမ်းကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းအနိုင်ကျင့်မှု၊ အခန်းကျဉ်းအတွင်း ရက်များစွာလှောင်ပိတ်ထားမှု (နှစ်မှု)၊ လုပ်ခလစာမပေးခြင်း (၇-မှု) စသည့် အလုပ်ရှင်တို့၏ အလွန်ဆိုးဝါးစွာ လူမဆန် စွာ နှိပ်စက်မှုမျိုးစုံပါဝင်သည်။ ယင်းမှာ အစိုးရသတင်းစာမှ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့များ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်မှာ ဤ ထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုပါသည်။ တချို့သည် လစာကာလ ကြာရှည်စွာမရ၍ တောင်းခြင်းကြောင့် ရိုက်နှက်ခံရပါသည်။ အချို့အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူတို့မှာ အလုပ်ရှင်သာမက အလုပ်အေးဂျင့်များ၏ မတရားညှဉ်းပန်း လူမဆန်မှုများကိုပါ ခံကြရသည်။
အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားတို့သည် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံသားအလုပ်ရှင်တို့၏ မတရားမှုများကို ခံ ကြရသည်။
– ဝေးကွာသောပြည်ပနိုင်ငံများမှ မိသားစု၊ ဆွေမျိုး၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ခွဲခွာ၍ လာရောက်လုပ်ကိုင်ရပီး၊ လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း လုပ်ဖော်ကိုင် ဖက်မရှိ၊ အထီးကျန်ခြင်း။ သူတို့သည် အလုပ်ရှင်၏အိမ်ထဲတွင်သာနေကြရပြီး၊ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆက်သွယ်ခွင့်မရကြ။ ဆက်သွယ်ချိန် မရကြ။ သူတို့ထံရောက်ရှိသောစာများ ထိန်းချုပ်ခံရခြင်း၊ ဖုန်းပြောဆိုခြင်းများကို ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်း။ ဘာသာစကားအခက်များကြောင့် နားလည်မှုလွဲခြင်းနှင့် လူမျိုးဘာသာမတူ၍ အတွေးအခေါ်ခံစားချက်ကွာဟခြင်း စသည်တို့က ပိုမို၍အထီးကျန်ဆန်စေခြင်း။
– တိကျသေချာသော အလုပ်သမားဥပဒေဆိုင်ရာခေါ်စာနှင့် ကန်ထရိုက်စာချုပ်များမရှိခြင်း၊ ရှိသော်လည်းထိရောက်စွာ ကာကွယ်မှုမရခြင်း၊ အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူအလုပ်သမများကို အလုပ်ရှင်နှင့်အများက အဆင့်နိမ့်သောသူများအဖြစ်သတ်မှတ်၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရခြင်း၊ အခြား အလုပ်သမားများကဲ့သို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အလုပ်အကိုင်တစ်မျိုးကိုသာ လုပ်ကိုင်ရခြင်းမဟုတ်ဘဲ အလုပ်ရှင် (အိမ်ရှင်) ၏ ခိုင်းစေမှုမှန်သမျှ ကို လုပ်ကိုင်ပေးရခြင်း၊ ငြင်းဆန်ခွင့်မရှိခြင်း၊ မလေးရှားအလုပ်အကိုင်ဥပဒေကလည်း အလုပ်ရှင်ကို အကာအကွယ်များစွာပေးထားခြင်း။
– မလေးရှားတို့သည် ပြည်ပမှလာရောက်လုပ်ကိုင်သူများကို ယင်းတို့ထက် အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသည်ဟုသတ်မှတ်သည့်အပြင် ခွဲခြားဆက် ဆံခြင်း၊ စော်ကားမိုက်ရိုင်းမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုကြခြင်း၊ အလုပ်သမားတို့မှာ လူတစ်ဦးကဲ့သို့ပင် ဆက်ဆံ မှုမရခြင်း၊ လူသားတစ်ဦးအဖြစ် စာနာလေးစားမှုမရခြင်း။
မလေးသတင်းစာများမှ မလေးရှားနိုင်ငံသားတို့၏ အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူတို့နှင့်ပတ်သက်သည့် ယင်းတို့၏အခက်ခဲများကိုတင်ပြရန် ဖိတ် ခေါ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအတိုင်း ပြန်ကြားခဲ့ကြသည်။ (နံပါတ်စဉ်အလိုက် တပ်ထားသည့်အချက်များသည် မလေးရှားအလုပ်ရှင်များမှ ယင်းတို့၏ အိမ်ဖော်၊ အိမ်အကူများနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းစာသို့ တင်ပြချက်များဖြစ်ပါသည်။)
၁။ အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူတို့သည် အလုပ်စပြီး မကြာမီတွင် ထွက်ပြေးကြသည်။
မလေးသတင်းစာများက ယင်းအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမတို့၏ အလုပ်ရှင်အပေါ် အခွင့်အရေးယူမှုများ၊ မယုံကြည်ရမှုများကို ယင်း တို့နိုင်ငံသား အလုပ်ရှင်များတင်ပြသည့်အတိုင်း လေ့လာစမ်းစစ်မှုမရှိဘဲ ပြစ်တင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ တချို့က အလုပ်သမတို့သည် ပျင်းရိ ကြောင်း၊ အလုပ်မလုပ်လိုကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ သို့အတွက်ကြောင့် ထွက်ပြေးကြကြောင်းပြောခဲ့ပြီး၊ ယင်းတို့၏ အပြုအမူလုပ်ဆောင်ဆက်ဆံမှုများကိုမူမဖော်ပြဘဲ ယင်းတို့သဘောထားကောင်းလျက်နှင့် ထွက်ပြေးကြသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့၊ ၁၉၉၇ ထုတ် New Straits Times သတင်းစာသို့ပေးပို့သော အိမ်ဖော်အလုပ်ရှင်တစ်ဦး၏စာတွင် ယင်း၏အိမ်ဖော် သည် ညအခါ အခြားယောက်ျားလေးများနှင့် ပြင်ပတွင်သွားအိပ်နေ၍ ရောဂါရလာပါက ယင်း၏အိမ်သားများကူးစက်ခံရမည်ကို စိုးရိမ် ကြောင်း ရေးပို့ခဲ့သည်။ အလုပ်ရှင်များသည် ယင်းတို့၏အိမ်ဖော်များ အိမ်တွင်သာနေ၍ တနေကုန်တညလုံး၊ အလုပ်ကို မရပ်မနား လုပ်စေလို ပြီး၊ အကယ်၍ အကြောင်းကိစ္စတခုခု၊ အရေးကြီးကိစ္စတခုခုကြောင့် အလုပ်သမက ပြင်ပသို့သွားရောက်ရသည်ကိုပင် ဤကဲ့သို့စွပ်စွဲမှုများ တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် အိမ်ဖော် အလုပ်အကိုင်အေးဂျင့်တဦးကပြောဆိုသည်မှာ ယောက်ျားလေးမိတ်ဆွေထား၍ အိမ်ရှင်တို့မှ ရိုက်နှက် သည်ဆိုသည်မှာ လိမ်လည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အမှန်မှာ အိမ်ရှင်တို့၏ လူမဆန်စွာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကြောင့် ထွက်ပေါက်အနေနှင့် တ ချို့တလေသာ ယောက်ျားလေးမိတ်ဆွေထားလာရကြောင်း ပြောဆိုသည်။
၃။ အိမ်ဖော်များသည် မိမိတို့၏လင်ယောက်ျားကို ခိုးယူကြသည်။
ဤအချက်မှာ အိမ်ဖော်များကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်မရှိဟု အခြေအမြစ်မရှိစွာ စွပ်စွဲပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့၊ ၁၉၉၇ ထုတ် New Straits Times သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သော စာတစ်စောင်အရ အိမ်ဖော်သည် ယင်း၏လင်ယောက်ျားနှင့် ဖောက်ပြန် ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ မေလ ၁၇ ရက်နေ့၊ ၁၉၉၈ The Sun သတင်းစာက အိမ်ရှင်လင်ယောက်ျားသည် ယခင် သူ၏အိမ်ဖော်နှင့် လက် ထပ်သွားသည့် အမှု ၈- မှုရှိကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် သတင်းစာတို့တွင် ဖော်ပြသည်နှင့်ဆန့်ကျင်စွာ၊ အိမ်ရှင်ယောက်ျားသည် အိမ်ဖော်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတရားအကြမ်းဖက်ခြင်း၊ ကြိုးပမ်းခြင်း၊ မုဒိန်းကျင့်ခြင်း၊ အချို့အမှုများတွင် ဆိုးဝါးစွာကျင့်ကြံခြင်းများ ပါဝင် သည်။ ထိုကဲ့သို့ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြသည့်အမှုများမှာ မှန်ခဲ့သည်ဆိုစေကာမှု၊ အမှန်တကယ် အိမ်ရှင်ယောက်ျားနှင့် ယင်းတို့နှင့်ပတ်သက် သောယောက်ျားတို့၏ မတရားစော်ကားမှုကြောင့် ဒုက္ခရောက်၊ အသက်ဆုံးရှုံးရသော အိမ်ဖော်အလုပ်သမတို့အမှုအရေအတွက်မှာ အဆ ပေါင်း ထောင်နှင့်ချီ၍ရှိပါသည်။ (WAO)
၄။ သူမသည် မိမိတို့နိုင်ငံအောက် ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်း များစွာနိမ့်ကျသောနိုင်ငံမှလာသည်ဖြစ်၍ သူမ၏အကျင့်စရိုက်တို့ကြောင့် မိမိ တို့အိမ်ထောင်ရေးဘ၀ ပျက်စီးနိုင်သည်။
မလေးရှားတွင်လုပ်ကိုင်နေသော အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူအလုပ်သမတို့မှာ အများအားဖြင့် အင်ဒိုနီးရှား (ယခုအင်ဒိုးနီးရှားအစိုးရမှ မလေးရှား သို့ အိမ်ဖော်အလုပ်သမပို့ခြင်းကို လုံးဝပိတ်ပင်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါပြီ။) နှင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့မှ ဖြစ်ကြသည်။ အိမ်ရှင်တို့မှာ ယင်းတို့၏ကလေးများ မိမိတို့ဘာသာစကားကို အင်ဒိုအသံ၊ ဖိလစ်ပိုင်အသံနှင့် ပြောကျင့်ရသွားမည်ကိုစိုးရိမ်ကြောင်း တင်ပြခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အိမ်ဖော်တို့၏ မူရင်း နိုင်ငံသည် မိမိတို့ထက် ယဉ်ကျေးမှုနိမ့်သဖြင့် မိမိတို့၏ကလေးများ နိမ့်ကျသောယဉ်ကျေးမှုများလွှမ်းမိုးခံရမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း၊ ကလေးနှင့် မိဘအကြား ကွာဟမှုများဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ ယင်းတို့၏ အစိုးရပိုင်းများကလည်း ဤအချက်ကိုထောက်ခံ၍ အိမ်ဖော်များကို ပညာပေးမှု၊ လေ့ကျင့်ပေးမှုများပြုသင့်ကြောင်း အော်ခဲ့ကြသည်။ ————–
(သို့အတွက်ကြောင့် ယခုလက်ရှိ မလေးရှားတို့သည် အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ကမ္ဗောဒီးယားနိုင်ငံတို့မှ အိမ်ဖော်နှင့်အိမ်အကူအလုပ်သမားများ ပို့ဆောင်ခြင်းကို ရပ်တန့်ခံလိုက်ရသည့်အတွက် မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ဖော်အလုပ်သမများရရှိနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိကြံ့ဖွံ့အစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားအပေါင်း အားလုံးတို့သည် တာဝန်သိသိဖြင့် ဤလုပ်ဆောင်မှုကို အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြစေလိုကြောင်း လေးစားစွာတိုက်တွန်းရင်း…. ဧပြီလ ၁၄ ရက် နေ့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ထုတ် The Star သတင်းစာမှ “မလေးအိမ်ရှင်တို့၏ ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့သော ကမ္ဗောဒီးယား နိုင်ငံသူ၊ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်၊ Mey Sichan ၏ အမှုအသေးစိတ်ကို ထပ်မံစုံစမ်း၍ တင်ပြပေးသွားပါမည်။—–ဘာသာပြန်သူ)
http://mgpala.blogspot.com/2012/04/women-aids-organisation-wao-friend-ever.html မှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။
10 Responses to မလေးရှားနိုင်ငံသား အလုပ်ရှင်တို့၏ အိမ်ဖော်၊ အိမ်အကူအလုပ်သမများအပေါ် မတရားပြုခြင်းနှင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများ
mankyi on April 16, 2012 at 10:58 am
သိပ်ကောင်းတဲ့ သတိပေးချက်ပဲ ။ များများအော်ပေးသင့်ပါတယ် ။ ဒီအချက်ကို အရမ်းကို ကန့်ကွက်ပါတယ် ။ လူမျိုးရေးအရ ကြည့်ရင်လည်း အောက်တန်းကျတဲ့ အလုပ်ပါ။ အစိုးရကလည်း ဒါမျိုးကျတော့ ဇာတိမာန်ထက်သန်ရေးတွေပါတွေ အော်မနေတော့ဘူး ။ သူ့လက်ကလွတ် ပြွတ်ဆိုတာလို လုပ်ချင်နေတယ်။ အစိုးရတရပ်ဖြစ်ပြီး ဒါကို မကြားမိဘူးလား ။ မသိဘူးဆိုရင်တော့ တော်တော် ဗဟုသုတနည်းတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ သိရဲ့သားနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကို တရားဝင် ရောင်းစားသလို လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လူမျိုးက အောက်တန်းမကျဘူး။ အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ ငါးခုံးမတွေကြောင့်လို့ ပြောရမယ်။ ကျွန်တော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် မလာကြဖို့ သတင်းဖြန့်ပါမယ် ။ ဆောင်းပါးရှင်ကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ အတွက် ကျေးဇုးလည်း အထူးတင်ပါတယ်။ ခုလို တင်ပြပေးတဲ့ အတွက်ပေါ့
win mon on April 16, 2012 at 11:20 am
ma burma ma on April 16, 2012 at 1:41 pm
Thank you for your good information writer….please give more information for our burmese’s lady’s…
nay myo on April 16, 2012 at 1:52 pm
please prevent to this appotunity
mgoogyaw on April 16, 2012 at 5:30 pm
Totally appreciate and support this article which is to be avoid to our Burmese women. Yes,our country has become poor and poverty because of the bad Governance of this Military Junta,for 50 years over.So, even our children,who are graduated from Burma Universities,has no good and worthy works inside our own country,so, mostly,have to do what ever works,they can do in abroad.After,we have realize the worst treatment of the Malaysians Hosts,we must protect and need widely to tell the women,who wants to go to Abroad,and some even think,foreign countries are like Paradise. Actually,Abroad is the only place that makes and feels good,if, you have money to spend,there,not, to work.Youngsters must be taught by their elders or the senior who knows about Abroad,to protect and to avoid what this article said.
Mon on April 16, 2012 at 8:05 pm
Thank you so much for this, and we should sign up for “A CAMPAIGN AGAINST SENDING OUR BURMESES GIRLS AS HOUSEMAID TO MALAYSIA!!!!!”
mgmg on April 16, 2012 at 9:13 pm
သိန်းစိန်ရေ…အဲဒါကိုသာလက်ခံလိုက်ယင်မင်းတို့ ရဲ့ ကြံ့ဖွတ်အလံကိုရေထဲသာမျှောလိုက်တော့.။
hla tun kyaw on April 16, 2012 at 10:04 pm
campaign လုပ်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကိုပါ တိုက်ရိုက်အိပ်ဖွင့်ပေးစာပို့သင့်ပါတယ်။
Lin on April 16, 2012 at 11:15 pm
The right article and thanks for that.
tintunaung on April 16, 2012 at 11:42 pm
yes…it is true. because before i live malaysia 20 year..i know about house maid trouble…alot of case in malaysia.